dd: tusaalooyinka amarkan faraha badan | Laga soo bilaabo Linux
El amarka dd si fiican ayaa looga yaqaan Linux. Waa amar si caddaalad ah u kala jaban, laakiin in yar ayaa runtii og waxa ay ka qaban karto wixii ka dambeeya taageerada ama baakadka macluumaadka. Marka waxaan go aansaday inaan abuuro casharkaan fudud oo leh tusaalooyin wax ku ool ah oo ku saabsan waxa amarkan dd sameyn karo. Dhammaantood waa tusaalooyin fudud oo ah waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto maalin kasta.
Hagaag waxaan filayaa inaad horayba u ogayd waxa dd yahay amar UNIX ah taasna waxay u oggolaanaysaa koobiyeynta iyo beddelidda xogta heer hoose, sidaas darteed waa xoog badan tahay. Waxaa guud ahaan loo isticmaali jiray in lagu sameeyo keyd ama nuqulo nuqul ka mid ah warbaahinta keydinta qaar, laakiin sidoo kale in lagu wareejiyo xog gaar ah, laga beddelo nooc ka mid ah codeynta mid kale, iwm In kasta oo ay umuuqato aalad aad u horumarsan, haddana wali si aad ah ayaa loo adeegsadaa ...
Qaarkood tusaalooyin ficil fudud amarkan waa:
Hal ku dheji hal waddo adag mid kale sidaa darteed sdb waa nuqul sax ah oo ka kooban sda:
Samee nuqul nuqul galka ah, feyl, ama qeyb oo abuur sawir (IMG, ISO, ...):
Soo celi keydkii hore:
Abuur ISO ah qalabka 'optical disc':
Ka tirtir xogta wadista adag adoo dib u qoraya:
Abuur feyl leh cabir cayiman, kiiskan 10 bytes, laakiin waad dooran kartaa xaddiga aad rabto, iyo haddii aad wax ka beddelayso tirinta 2, tusaale ahaan, way soo koobi kartaa:
Waxaan rajeynayaa in casharradan ay ku caawiyeen, sida aad u aragto inay tahay mid aad u fudud, laakiin waxay kaa badbaadin kartaa inaad rakibto barnaamijyo kale oo dheeri ah. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad sameyso ISO-ga CD / DVD / BD, waxaad isticmaali kartaa dd halkii aad ka heli lahayd barnaamij gaar ah arrintaas. Taasi waxay sidoo kale i xasuusineysaa / dev / loop ama aaladda loop, oo waliba kaa caawin karta inaad sare u qaaddo ISO oo aad u hesho marinteeda iyada oo aan software kale oo dheeri ahXusuusnow inaad ka arki karto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan dd "man dd". Waxay leedahay fursado badan oo aad xiiso u yeelan karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » dd: tusaalooyinka amarkan isku dhafan
Valve wuxuu isku dayayaa inuu hagaajiyo dhibaatooyinka Dota 2